Raaxada Wave Point caarada daabacan sheer for qolka gogosha, Shiinaha Raaxada Wave Point polyester daabac sheer qolalka gogosha Soosaarayaasha, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: 8669
● Wave Point naqshadeynta naqshadeynta daah sheer, 100% polyester, cabbirka la habeeyay
Curtains Daahfannada xargaha daabacan ee loogu talagalay daahyada naqshadeysan waxay ka samaysan yihiin 100% polyester waana la soo dejiyey
Be Waxay sudhan yihiin 8 grommets.
Daahyadaas qurxoon tayo ahaan iyo naqshad ahaanba lama mid aha. Daaqadaha daaqadahaani waxay abuuraan jawi diiran oo leh faafin qurux badan.
● Daaha ayaa diyaar u ah in la isticmaalo. Waa mashiin la dhaqi karo oo fudud in la daryeelo.
Product Name Raaxada Wave Point daabacaadda polyester sheer for qolka gogosha